Sahan tag : sidee/xagee loo sahan tagayaa?
Aalaaba markuu reerku ciirsado dhul baaxad soora ah aynan dhibicdiyo wax roob ahi weheshan, wxy goor dambe talo uguso aruuurta in kooda mrkaa ugu roon uguna dhul ogaansho roon iny bidaan inu reerka dhul dheer ugu sahmiyo .
Kaasi mar walba wa mid reerka goortan okale inta kabo tolaaa ah lo xardho jicsin u caloosha bidana guntiga lo gasho .
Wa ruux odoros dheer hadba dhibicdu dhankay ku jihaysantahy iyo meshy biyo dhigi aalaaba grn kara.
wa ruux kla garan og dhulka intu reerku nagi, clfkaasna xooluhu irsaaqanyyo, aanan lagu ogayn qof reerka ku fura baylah dabadeed waxan san ahyn reeku goor dambe ka dhaxlo:
Si lamida safrkaagan ku salysan raadinta iyo sahminta qofkaad raaska kula hoyan lhyd ,
Kulansadyna siifaadki sahanka,
Wxd ubaahantahy ood ka bilaabi ind isgu diyaariso ood noqoto adgu qof xoog u masaafo dheer ugu socdaali lahaaa leh,
inaad kabaha utolato dhul quxandhadu ay barxantahy ood jicsinka aad wdada ku mari lahyd dhabrka ku sidato.
Wxaaan meesha ka marneen ind ogtahy aqoona aad uleedahy halky ka hilaaci tii midabka qurxoneed ama kaad goobaysay ahaatana (ahaadana)mid lgu aaayo.
Waxy la micna tahy ind adgu nafsaddada ulyliso jir ahaan , wakhti ahaana diyaar u tahay.
Inaad radin kadho wxy naftaadu tabyso
si lamida inaad garan karyso wxd raadinyso aad sawir humaag camli kaaga muuqato hortaada .
Intaasi wxy kaaa caawin ind bilowgi hayso .
Intaas aan kaga gudubno sawirka guud ay wadagaan qof markaa u sahantagy reerkiisa iyo qof usahantagy naftiisu wxy doonyso .
Seee u wajjahaysaa?
1- talaabada ugu mudani wa inaad garan karysaa ciddad raadinyso.
saan ku xusay tusaalaynta guud wa in aaad sawir hummaag ah aad ka hysato qofkaaad doonyso nooca uu yahy muuq ahaan ,dabecad ahaan iyo diin ahaanba intaaas mrkd grn kryso wxa muran ku jirin ind raadin kryso.
wxyna kaa caawin doonta inaadan dhex boodin dunidan boqolka midab ah wxyna kuu horseedi inaad waxbadan indhaha ka laabato adoon wakhti ku dhuminyn kuwa aad mrka aad ka wydo inysan hooos joogin astaaamihi aad mala awaaalaty .
2- wa in aaad shaksiyyan tahay qof diyaar ah.
Mrkynu leenahy wa in qofku shakhsi ahaan udiyaarsanyahy Wxynu ukala qaadyna laba qodob.
Marxaladda 1aad guurka hortiii :
Waxaad usocota nolol ka duwan taad taqaany wa inaad garan karysaa inaad joogto wakhtigii aad wajihi lahyd qaybtaa cusub ee kamida nolosha ka horse wa inaad isugu diyaarisaa dhaqaaale ahaan iyo xag maskax ahaanba ood fahan dheer ka hysatto barbaarinta ubadkaaga iyo la tacaamulka afadaada .
Marxaladda 2aaad guurka dabadii:
Waxynu dareensannahy inDabeecadda bani aaadamka ay ku dhisantahy qofku mrku mrxld cusub noloshiisa galo usan hory wx aqoona ulahyn in mrkaa ay so wajahaan caqabado badan oo ugub ku noqda .
Si lamida markd ku jidho mrxld qoys wxy leedahy dhibaatadeeda, taas ado maanka ku hayya waxa khasab ah inaad xammilo kadho dhibatadaas masuuliyad culusna aad qaadi kadho, waxana barbar socda inad garan karysaa caqabad walba iyo xalkeeda aaad ku wajahdaa sida ugu sahlan aad uga gudbi kadho markaas.
3-ugu dambayn wa inaaad nafsaddaada udiyaariso socdaal iyo baaadi goob.
Sida kusoo aroodhay qur’aankena suuban alle wuxu na fari inynu dhulka soconno aynu raadinno fadligiisa iyo irsaaqaddiisaba
Taaas wxy nasiinysa xikmad ah inynan gcmaha iyo lugahaba laaban aynu wakhti ku bixino wxa markaa inaga guuxayya .
Si lamida wa inynu wakhti ku bixinaa raadinna shakhsiga aad uhibyn doonto nafsaddaada
FG: Wxaan jeclahy qormadaydan inan yra xasuusin dhextaal ah uga dhigo in wxkstaa ay ku socdaan qadar alle aanad adigu xakamadeeda iyo go’aankeeda aadan lahyn wx wlba wxy ahaadeen ahaanna doonaan ahaanshaha ama raabitaanka alle wxa innaga ina saarani wa dadaal un iyo wxynu damacno inynu raadinno, hadynu ka gungaarnana wa qayb kamida fadliga alle in lagu shukriyana mudan.
hddi ay si kale noqoto wa qadar eebbe leeyahy laguuna gartay qanacadeeda lagaa doonayyo .
Eebbe wxn ka baryyna inu nawaafajiyo malahayaga wa haddi kahyr ku jiro
Noona wanaajiyo aayaheena dambe aduun iyo aakhiro.
W/Q : Eng mohamed abdalla “caynsane”
Tags: afsomali, dhaqanka baadiyaha, geedi, reerguurae, sahan, somalida
Previous PostCAQLI HAWEEN
Next PostAhmiyada Salaada.
Maxaa sababy midab takoorka iyo quudhsiga ina afeeyey?
maxaad ka ogtahay faa’idooyinka caafimaad ee soonka bisha ramadaan?
Dhambaal jacayl (Ubax) Q1